Meles, Jwxo-shiil Baa Ogadeen Kala Baray – Rasaasa News
Aug 24, 2010 dambiile, ertrea, Jwxo-shiil, ONLF
Bilowgii sanakii 2007, ka dib kolkii Jwxo-shiil, laga qaaday xilka Gudoomiyenimada ayuu in badan isku dayey in uu heshiis la galo dawlada Itobiya. Heshiiskaas oo u dabo galyey Cabdulahi Yuusuf, Jwxo-shiil, ayaa xiligaas ku cawday in uusan haynin dhaqaale oo isugu keeno xubnaha Jabhada, oo meelo kala fog fog jooga iyo waliba kasbashadooda.
Cabdulahi Yuusuf oo wakiil ka ahaa xiligaas dawlada Itobiya ayaa Jwxo-shiil, u dhiibay $100, 000. Jwxo-shiil, ayaa arintaas u bandhigay qaar ka mid ahaa xubnihii isaga la go,ay kolkii xilka laga qaaday. Qaar ka mid ah ayaa ka gaws qabsaday qaarna waxay yidhaahdeen, inta aynaan heshiis galin aan Dr. Dolal is dhaafino.
Jwxo-shiil, kolkii uu shan bilood ka maqnaa Cabdulahi Yuusuf, ayey isku arkeen magaalada London, wuxuuna ku yidhi “wakhti ha la i siiyo niman reer cabdile ah oo iga laandheeraysan iggagana awood bada ururka ayaanan waxba ka wadi karine.” Hadalkii isaga ahaa Cabdulahi Yuusuf wuxuu u geeyey Meles, $100, 000 kale ayaa Jwxo-shiil la siiyey si uu wax uga qabto raga oo sheegay.
Jwxo-shiil, Dr. M s Dolal, kolkii uu maqlay gudaha ayuu galay si deg deg ah ayuu uga dabo galay, waxaana thoryyihii Dr. Dolal xidhiidhinayey Cabdala Afwaranle oo throyyihiisu ku xidhnaa Safaarada Itobiya ee Dubai. Dr. Dolal, waxaa dilay raga uu u sameeyey Jwxo-shiil, oo kaashanaya ciidanka Itobiya.
Kolkii, uu Jwxo-shiil, dilay Dr. Dolal, waxaa dhacay kacdoon xoog leh, oo Onlf gabi ahaanba ay dadweynuhu kagga hor imanayaan, waxayna dareemeen in ayna meesha jirin jabhad daacad loo yahay. Arintaas Itobiya isha ayey ku haysay, waxayna ogaatay in Jwxo-shiil, uusan waxba faraha ku haynin. Sidaas ayeyna go,aan ku gaadhay Itobiya in ayna la hadlin Jwxo-shiil, cid kale oo ay la hadashaba.
Kolkii, ay ogaatay Itobiya in dadweynihii Somalida Ogadeeniya ee taageeri jiray halganka ay taageero siinayaan Eng. Salaxudin. Waxaana cadaatay in dadweynuhu jecel yihiina nabad ka dhacda dhulka Somalida Ogadeeniya. Itobiya waxay u bandhigtay dadweynaha qurbo joogta ah in ay nabad ka raadiyaan ONLF-Salaxudiin, wayna ku guulaysteen dadweynuhu arintaas.
Jwxo-shiil, wuxuu ku cel celyaa nabad doonimaayo oo xornimo doon baan nahay. Jwxo-shiil, wuxuu ahaa ninkii ugu horeeyey ee bilaabay nabad laga raadiyo Itobiya, qorshihiisii weelbanaysiga ahaana waxaa uu ku yidhi “reer cabdile yaa onlf, iggaga xoog badan igana laan dheeraysan, waxaanan rabaa in aan sir ku kala diro.”
Maanta kolkuu Meles yidhi wixii uu hore u yidhi Jwxo-shiil, maxaa keenay waa nala gumaadayaa!